1. Ny fitambarana tonga lafatra amin'ny toast frantsay. Mahafinaritra tokoa ka tsy afaka mitsahatra misakafo ianao
2. French Toast, na fantatra fotsiny amin'ny hoe mofo atsoboka atody, amin'ny fomba tandrefana mahafinaritra. Izay azonao noforonina ho tsindrin-tsakafo matsiro Izay azo aroso amin'ny fety Fety na toy ny tsakitsaky Ny fampidirana azy ho sakafo maraina hohanina miaraka amin'ny ronono, dite na kafe, ary azo atao ho tsindrin-tsakafo ho fandraisana ihany koa ny tolakandro. Izay afaka milaza aminao fa mora ny toast frantsay, ary raha voaravaka voankazo vaovao dia hanampy Sanda mahavelona tanteraka Fanampin'izay, rehefa hanina dia mbola mahatsiaro ho velombelona sy ho velombelona. Ny French Toast koa mora be ihany. Na tsy mahay mahandro aza ianao Plus tsy sarotra ny manomana akora Azo vidiana eny an-tsena Trano fivarotana Na fivarotana enta-mavesatra ihany koa Raha vonona dia ndao isika hanomana akora masaka ho an'ny Berry frantsay toast matsiro. Dingana fanomanana ny akora toy izao
3. Mofo 2 voadio
4. Atody 2
5. Ronono vaovao 1 kaopy
6. Sira kely iray kely ho an'ny tsiro malefaka kokoa.
7. Voankazo voankazo toy ny blueberry, frezy, na karazana voankazo.
8. Akondro 1
9. Tantely, arakaraka ny tsironao
10. Dibera kely tsy nasiana sira
11. Omano ireo zavatra ilaina Araraka ao anaty vilia ny ronono sy atody vaovao. Manampia sira kely dia kapohina raha atambatra, na afaka mampiasa mixeur ianao.
12. Atsofohy ao anaty atody nokapohina sy ronono amin'ny lafy roa ny mofo, aorian'izay dia arotsaho amin'ny lapoaly ambany ny lapoely ary ampio dibera kely, na 10 grama eo ho eo. Avadiho io mba hataony volamena sy manitra ny mofo amin'ny lafiny roa: rehefa vonona ny mofo dia apetraho ary manaova iray hafa.
13. Arotsaka dibera kely amin'ny lapoely avy eo. Avy eo tapaho amin'ny vera ilay akondro ary endasina dibera Izay amin'ity fomba ity no hahatonga ny akondro ho mahafinaritra kokoa
14. Aorian'izay dia apetaho amin'ny lovia ny mofo roa. Voaravaka voaroy Mba ho tsara tarehy dia apetaho manodidina ilay lovia ilay akondro ary arotsaho araka izay itiavany azy ilay tantely. Izay ilay izy, vita ny toast french.
15. Manao ahoana ianao Amin'ny fomba fanamboarana toast frantsay izay azo amboarina mora foana dia azoko lazaina fa matsiro be. Ary koa menio iray hitsenana ireo vahiny Manan-karena amin'ny akora mora hita Amin'ity fialantsasatra ity dia andao hanao mofo toast frantsay hiarahan'ny mpianakavy na ny namana hiara-misakafo, dia handevozin'ny zava-matsiro ianao. Ary dia menio mamorona tena mety ho an'ny rehetra